हृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत - खबर मलाई
अब खबर सबैलाई …
हृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत
२९ श्रावण २०७६, बुधबार २९ श्रावण २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on हृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत
स्वस्थ रहने भन्नासाथ हामी शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने र मोटोपना घटाउने कुरा मात्रै गर्छौं । तर, स्वस्थ, जवान र चुस्त रहनको लागि मोटोपना घटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन पक्कै पनि । हाम्रो शरीरका भित्री अंगहरुको हिफाजत पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
शरीरभित्रको अति महत्वपूर्ण एक अंग हो मुटु । शरीरका प्रत्येक अंगमा आवश्यक रगतको आपूर्ति गर्ने काम यसले गर्छ त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ । तर, अहिलेको तनावयुक्त व्यस्त जीवनशैलीका कारण मुटुरोगीहरु बढिरहेका छन् । पहिले-पहिले उमेरदार मानिसहरुलाई मात्रै हुने मुटुसम्बन्धी समस्याले अहिले युवाहरुलाई पनि आफ्नो चपेटामा पार्न थालेको छ ।
मुटु स्वस्थ राख्न हामीले पहिले त तनाव हटाउनुपर्छ । त्यसपछि सक्रिय जीवनशैली अपनाएर र स्वस्थकर भोजन गरेर हामी मुटुलाई हिफाजत गर्न सक्छौं । यहाँ हामी मुटुलाई स्वस्थ राख्ने विभिन्न उपायहरुको चर्चा गर्दैछौं ।
फ्याट अर्थात बोसो हाम्रो भोजनको महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले हाम्रो खानालाई स्वादिष्ट बनाउनुको साथसाथै तृप्त पनि बनाउँछ ।
स्वस्थ रहनको लागि असल फ्याट र खराब फ्याटको अन्तरलाई सही किसिमले बुझ्नुपर्छ । ‘द अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन’ ले स्वस्थ रहनको लागि खानपानमा खराब -स्याचुरेटेड) फ्याटलाई असल -अनस्याचुरेटेड) फ्याटले विस्थापन गर्ने सल्लाह दिएको छ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि हामीले भोजनमा मोनो स्याचुरेटेड वा पोली स्याचुरेटेड फ्याट समावेश गर्नुपर्छ । पोली स्याचुरेटेड फ्याटले रगतमा खराब कोलस्ट्रोलको स्तरलाई कम गर्छ जसको कारण मुटुसम्बन्धी रोगहरु र स्ट्रोकको खतरा कम हुन्छ ।
यसबाहेक फ्याटले शरीरमा कोषहरु बन्न र विकसित हुन पोषक तत्व पनि प्रदान गर्छ । खानामा यस्तो तेलको प्रयोग गर्नुहोस् जसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम होस् । यसको लागि तपाईं मकै, जैतुन, बदाम, सोयाबिन वा सनफ्लावरको तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
माछा प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । अन्य मासुजन्य पदार्थको तुलनामा यसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा निकै कम हुन्छ ।
माछा ओमेगा फ्याटी एसिडको पनि राम्रो स्रोत हो । ईपीए र डीएचएजस्ता ओमेगा ३ फ्याटी एसिडहरु हाम्रो शरीरको लागि धेरै आवश्यक छन्, किनभने हाम्रो शरीरमा यसको निर्माण हुँदैन । यसलाई खानाको माध्यमबाट नै ग्रहण गर्न आवश्यक छ । यसका शाकाहारी स्रोतहरु ओखर, बदाम र सोयाबिन हुन् ।
ओमेगा ३ फ्याटी एसिडले शरीर सुन्निन -इन्फ्लेमेसन) कम गर्छ । इन्फ्लेमेसनको कारण रक्तनली क्षतिग्रस्त हुन्छ जसको कारण हृदयरोग वा स्ट्रोकको खतरा बढ्छ । साथै, यसले मुटुको धड्कनको उतारचढावलाई पनि नियन्त्रण गर्छ र मुटुलाई सुरक्षित राख्छ ।
हालै १५ सय वयस्क मानिसहरुमा गरिएको एक अध्ययनबाट ओमेगा ३ फ्याटी एसिड मष्तिस्कका लागि आवश्यक भएको पुष्टी भएको छ । अध्ययनअनुसार बच्चामा मष्तिस्कको सही विकासको लागि ईपीए र डीएचए आवश्यक छ । ओमेगा ३ फ्याटी एसिडले एकाग्रता बढाउन र कठिन कार्यहरु गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ ।
हृदयरोगबाट पिडित मानिसहरु खानाको माध्यमले पर्याप्त ओमेगा ३ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्ता मानिसहरु डाक्टरको सल्लाह लिएर ‘सप्लिमेन्ट’ ग्रहण गर्न सक्छन् । यसैले कुनै पनि खाद्य पदार्थ ग्रहण गर्दा त्यसमा पोषणको स्तर जाँच्नुहोस् र त्यसमा स्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरुको मात्रा कति छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
मुटु रोगबाट कसरी जोगिने ?
मुटुरोगबाट जोगिनका लागि कम उमेरदेखि नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । युवावस्थामा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने प्रमुख कारण धुम्रपान वा सुर्ति सेवन हो । यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ ।
यसबाहेक शारीरिक रुपले आफूलाई सक्रिय राख्नुपर्छ । तौल बढ्न नदिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सफ्ट डि्रङ्क्स, प्याकेटका जुस आदिको सेवन पनि गर्न कम गर्नुहोस् । सातामा एक पटकभन्दा बढि फास्टफुड वा प्रशोधित खानेकुराहरुको सेवन नगर्नुहोस् । खानामा फलफूल र हरियो सागसब्जीको मात्रा बढाउनुहोस् ।
दैनिक एकमुठ्ठी बदामको सेवन गर्नाले मुटुको स्वास्थ राम्रो हुन्छ । बदामले मुटुलाई स्वस्थ बनाउन आवश्यक मिनरल्स र फ्याटी एसिड प्रदान गर्छ ।
मुटुलाई सँधै जवान राख्नको लागि मानसिक तनाव कम गर्न पनि आवश्यक छ । यसको लागि योगा, एक्सरसाइज र मष्तिस्कलाई शान्त बनाउने अरु उपाय अपनाउनुहोस् ।
कम उमेरमा हृदयघात
एक अध्ययनअनुसार पश्चिमी देशहरुको तुलनामा दक्षिण एसियामा बस्ने मानिसहरुलाई १० वर्ष पहिले नै मुटुरोग लाग्ने गर्छ । कम उमेरमा हृदयघात हुनुमा वंशाणुगत कारणहरु पनि जिम्मेवार छन् ।
निष्कृय जीवनशैली, तनावपूर्ण काम, धुम्रपान, मदिरापान, चिनीयुक्त खानेकुरा र फास्टफुडको अत्याधिक सेवन यसका अन्य कारण हुन् ।
किन लगाउने जनै ?
गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ
शिक्षिकाको कुटाईबाट घाईते भएका बिद्यार्थीहरु एकै साथ मिडियामा | शिक्षिकाको कर्तुत यसरी पर्दाफास गरे
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार खबर मलाई
एमफिल/पीएचडी गर्ने शिक्षकलाई गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति दिने
२२ असार २०७६, आईतवार २२ असार २०७६, आईतवार खबर मलाई
२० असार २०७६, शुक्रबार २० असार २०७६, शुक्रबार खबर मलाई
देशका अधिकांश भूभागमा बदली र वर्षाको सम्भावना
८ भाद्र २०७६, आईतवार ८ भाद्र २०७६, आईतवार खबर मलाई
आफ्नै पक्षको मिसाइल प्रहारबाट भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको खुलासा
खेलाडी कसरी छान्ने ? विराटलाई गांगुलीको सुझाव
भालुको आक्रमणबाट किशोर गम्भीर
राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका
Sample News Portal | Designed by: by Shandesh Chaudhary.